Yaa SABAB u ah Guusha Xulka Qaranka Soomaaliya ee markii ugu horreysay gaaray Finalka? – Gool FM
Yaa SABAB u ah Guusha Xulka Qaranka Soomaaliya ee markii ugu horreysay gaaray Finalka?
Byare April 25, 2018
(Burundi) 25 Abriil 2018. Waa rajo uu maanka ku hayo qof walba oo sheegta magaca Soomaaliya, ugu dambayn guul lagu farxo ayuu dalkeena gaaray.
Weeraryahanka kooxda Gaadiidka Farxaan Duqoow ayaa gool cajiib ah u dhaliyay xulkeena, Ciyaartii galabta aan goolka Madiga ah kaga adkaanay Uganda waxaana sidaas ku tagnay Finalka tartanka 17 sanno jirada ee Bariga iyo Bartamaha Afrika .
Haddaba yaa sababteeda leh guusha Qaranka.
Sababta ugu badan uu qaran walba guul ku gaaro waa mid ka timaada macallinka, waxa ayna ku xiran tahay falsafadda uu adeegsanayo.
Ma dhicin Qarankeena sanadihii dambe in ay kubadda waqti badan ka haystaan cadwgooda, balse macallin Salaad ayaa xulalka Afrika tusay awooda iyo tayada ciyaartooyda Soomaaliya.
Qof walba oo aqoon u leh macallin Salaad waa uu ka war qabaa is badelka kubadeed ee uu ku samayn karo koox walba oo tababare loogu dhigo.
Jeenyo ayaa ahayd kooxdii ugu kubadda qurxoonayd Soomaaliya markii uu xilka hayay macallin Salaad laakiin iminka tayadii kubad haysasho malahan.
Waxaa loo sheegay xiddigaha inay guul ka sugayaan shacab fara badan, kuwaas oo u ooman in ay mar un meel wacan gaaraan.
Waxa laga soo xulay qaarkood tartankii kubadda cagta Barakacaayasha ee ka qabsoomay dalkeena, ciyaartooy laga soo xulay degmooyinka Gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah xiddigaha ka ciyaara saddexda heer ee Horyaalka Dalka.
Xiddigaha ayaa ahayn kuwa loo soo xulay jir ahaan balse macallimiinta ayaa ku soo xushay awooda ay u leeyihiin kubbad haysashada iyo raacasho aan kala joogsi lahayn.
Khabiirada Isboortiga ayaa aaminsan xiriirka kubadda cagta in ay qaateen go’aankii ugu saxnaa markii ay macallinka da’yarta qarankeena ay u magacaabeen Salaad Jardheeye.
Masuuliyiinta xiriirka kubadda cagta Qaaradda Afrika ayaa aad ugu riyaaqay is badelka kubadeed ee Soomaaliya, taa soo ku dhisan isku dhiib iyo raacasho.
Macallin Salaad oo caan ku ah kubadaha baaska ku dheehan ayaa xulka gacanta laga saaray, Wuxuuna ugu dambeyn ku hogaamiyay meel waqti badan lagu haminayay.
Guul ayaan u rajeynaynaa Macallin Salaad iyo xulkeena Qaranka.
RASMI: Liverpool Oo Xaqiijisay Inuu Soo Idlaaday Xili Ciyaareedka Chamberlain, Miyuu Seegi Doonaa Koobka Aduunka 2018?